Miyey Inter diyaar u tahay inay u dagaalanto hanashada horyaalka Talyaaniga? –Conte ayaa ka jawaabaya – Gool FM
Miyey Inter diyaar u tahay inay u dagaalanto hanashada horyaalka Talyaaniga? –Conte ayaa ka jawaabaya
Dajiye June 20, 2020
(MIlano) 20 Juun 2020. Tababaraha kooxda Inter Milan ee Antonio Conte ayaa hadlay maalin kahor kahor kulanka Sampdoria, kaddib in mudo ah ee aan la ciyaarin kulamada horyaalka Talyaaniga, sababa la xiriira COVID-19.
Kulankan oo ka qeyb ka ahaa kulamada 25-aad ee horyaalka Serie A kaasoo dib loo dhigay ayaa lagu ciyaari doonaa Giuseppe Meazza, haddii ay Inter Milan adkaato waxay ku soo yareyn doontaa farqiga u dhexeeya iyaga iyo Juventus 6 dhibcood.
Haddaba Antonio Conte ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada rasmiga ah ee kooxda Inter wuxuu ku sheegay:
“Waxaan heysanaa rajo weyn oo ah inaan dib u bilowno, waana wax iska caadi ah in tababarka kaliya uusan ku filneyn, waxaan u baahanahay kulamo rasmi ah”.
“Waxaan u isticmaalnay waqtigaas sidii aan nafteena ku hormarin laheyn, heer jireed iyo taatiko ahaan, waa inaan xilli kasta baranaa xulashooyinka kala duwan ee aan heysanaa”.
“Waxaan dareensanahay in Christian Eriksen uu faraxsan yahay, waana ku faraxsanahay qaabka uu u shaqeynayo, waxaana isku dayi doonaa sida aan banaanka ku soo saari laheyn wax walba sida ugu fiican xiddig kasta ee kooxda ku sugan”.
“Waxaan ku ciyaari doonaa 3 ama 4 maalmood kasta heerkul aad u sareeya, sidaas darteed waxaan u baahanahay dhamaan ciyaartooyda waxaan dareemayaa deganaansho, sababtoo ah carruurtayda wey ogyihiin waxa ay sameynayaan, xaqiiqdiina maqnaanshaha taageerayaasha ayaa saameyn xun nagu yeelan doonta, laakiin waxaan dooneynaa in waqtigan adag uu si fudud oo wanaagsan nagu gudbo, wax walbana caadi ayey ku soo noqon doonaan”.
Intaas kaddib Antonio Conte ayaa ka hadlay bartilmaameedyada kooxa wuxuuna yiri:
“Waxaan dooneynaa inaan qeyb ka noqono loolanka tartan kasta ee horteena ah, horyaalka Talyaaniga ama tartamada Yurub ilaa iyo dhamaadka, waa run inay jiraan kooxo naga horeeya, sida Juventus iyo Lazio, waxay leeyihiin udgood naga weyn anaga, laakiin waxaan dooneynaa inaan ku ciyaarno xamaasad iyo xasilooni”.
Zidane oo si RASMI ah ugu dhawaaqay liiska xiddigaha Real Madrid ee ka qeyb galaya kulanka Real Sociedad